PSJTV | २४ घन्टामै थपिए काेराेनाका ८३ नयाँ संक्रमित, कहाँ-कहाँ देखियाे नयाँ केस?
बुधबार, ३१ बैशाख २०७७ पिएसजे न्युज
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई सय १७ पुगेको छ । मंगलबार मात्रै ८३ नयाँ संक्रमित देखिएका छन् । २४ घन्टामै यति ठूलो संख्यामा संक्रमित देखिएको पहिलोपटक हो । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार पर्सामा ५७, रूपन्देहीमा नौ, कपिलवस्तु आठ, महोत्तरी, धनुषा र भक्तपुरमा दुई–दुई तथा बारा, काठमाडौं र सर्लाहीमा एक–एक नयाँ संक्रमित देखिएका छन् । अहिलेसम्म संक्रमण देखिएका दुई सय १७ मा एक सय ६७ पुरुष र ५० महिला छन् । उनीहरूमध्ये ३३ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन् । संक्रमित सबै स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा छन् ।
कोरोनाको आशंकामा काठमाडौं उपत्यकाभित्र एकजना र बाहिर दुई सय २७ जना अस्पतालको आइसोलेसनमा छन् । त्यस्तै देशभर १२ हजार सात सय ८५ जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाको आशंकामा पछिल्लो २४ घन्टामा दुई हजार दुई सय ३६ जनाको नमुना परीक्षण भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार देशभरका अस्पतालमा नौ सय नौ आइसियू र पाँच सय ३९ भेन्टिलेटर छन् । तीमध्ये तीन सय ४५ शय्या आइसियू र एक सय ४५ भेन्टिलेटर कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि तयार गरिएका छन् । बाँकी नियमित बिरामीको उपचारमा प्रयोग गरिनेछन् । सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका चिकित्सक डा.अनुप बाँस्तोलाले संक्रमितमा देखिएको लक्षणका आधारमा कोरोनाको उपचार हुने बताए ।
कोरोना संक्रमित भएर आइसियूमा पुगेका बिरामीलाई दिइने औषधि न्यून छ । औषधि व्यवस्था विभागलाई औषधि उद्योग र आयातकर्ताले उपलब्ध गराएको हालको मौज्दात सूचीमा ज्यादै न्यून मात्रामा औषधि देखिएको छ । कतिपय औषधि पाँच सय बिरामीलाई पुग्नेछ भने केही दुई सयजनालाई पुग्ने मात्रै छ।
लकडाउनमा ३७ वटा केस, ८१ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता